version 0.3.6 – သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်ငါ့ကိုအရှာရန်
ဒီဇင်ဘာလ 2, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
ဒီဗားရှင်းဟာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ feature ထပ်ဖြည့်, သောအခြားရွေးချယ်စရာဖြေရှင်းချက်မှနှိုင်းယှဉ်ကြည့်သောအခါကျွန်တော်ပင်ပိုကောင်းရာထူးမျှော်လင့်. ဤအဘာသာပြန်ထားသောစာမျက်နှာများပေါ်တွင်ဘာသာပြန်ထားသောဘာသာစကားတစ်ခုရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်သည်. ဒါကြောင့်ယခုသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘာသာပြန်ထားသောအများကြီးပိုရရှိနိုင်သင့်အသုံးပြုသူများမှဖြစ်လာ.
ငါတို့သည်လည်းသိသိသာသာကို RSS ကိုဒီဗားရှင်းအတွက်အထောက်အပံ့ feeds တိုးတက်လာ, နှင့်ယခုကိုစနစ်တကျမှန်ကန်သောဘာသာစကားလင့်ထားသည်, RSS အတွက် ချိတ်ဆက်.. ကျမတို့ဟာဒီနဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီကို datapharmer ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်. ငါတို့သည်လည်းသတိပြုဖို့လိုပါတယ်, google မှာ Sitemap ပေါင်းစည်းရေးတောင်းခံသောရှိသမျှကိုအသုံးပြုသူများအတွက်, က RSS feeds ကို Google site ပေါ်တွင် Sitemap အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟုသူ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အသစ် RSS Feeds နဲ့ comment ကိုထည့်သွင်းခြင်းများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပြီး google မှာပိုကောင်းမြင်သာမှုရှိစေခြင်းငှါ.
ပြီးခဲ့သည့်အသေးစားပြင်ဆင်မှု, ငါတို့သည်ယခုစ translate type ကိုခလုတ်တင်သွင်း (ရှာဖွေရေးပုံစံကောင်း).
ငါတို့သည်သင်တို့အဒီဗားရှင်းကိုမွေ့လျော်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ် – ဘာမှမကျိုးပျက်လျှင်, တော့ဒီမှာမှတ်ချက်ပေးရန်, နှင့်ကျေးဇူးပြုပြီး – ကျမတို့ reply နိုင်မေးလ်ကိုသုံး, မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ပြန်သင်ရနိုင်ရင်, တစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းအရာဖြစ်ပါသည်…
စိတ်ကူးများ, bug တွေကြောင့်, ထောမအမြဲကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, ရှာဖွေရေး, wordpress မှာ plugin